Guangzhou Berlin Auto Parts Manufacturing Co., Ltd.Ukuthengiswa kweShishini:
Land Rover Ac isiguquli
Komatsu Ac isiguquli
Kia Ac isiguquli
Mahindra Ac isiguquli
Isicinezeli seMazda Ac
IMercedes Benz Ac isiguquli
Mitsubishi Ac isiguquli
INissan Ac isiguquli
I-Perodua Ac isiguquli
ISuzuki Ac isiguquli
Isicinezeli seToyota Ac
IChevrolet Ac isiguquli
IHyundai Ac isiguquli
Ukugcina amandla okupakisha
Eyona nkonzo isemgangathweni
Sinokuvelisa isiguquli se-TM13-TM31
Ingcali yeHydraulic Power Steering Rack kwiXabiso leFektri
Njengomnye wabavelisi beRack Hydraulic steering rack, iBerlin igxile ekuveliseni izixhobo zokumisa umoya kunye nokuqhuba. Imveliso yokubeka izinto ihamba nomgangatho ofanayo wokujikeleza komoya. Iqondo lobushushu esesibhakabhakeni kunye nokufuma okuhambelana noko kuye kwalungiswa ukuze kugcinwe kufanelekile ngokufanelekileyo.
Ilungisiwe& Ukufunyanwa kokufuduswa
Sivelisa isiseko& I-compressor eguquguqukayo.
Umgangatho ophezulu we-ESP kunye ne-Electric Car Steering Rack
Ngaba ufuna ukufumana inkampani yamalungu e-auto ebonelela ngomgangatho ophezulu wokulawulwa kwamandla? Jonga le vidiyo kwaye wazi ezinye iinkcukacha malunga ne-ESP kunye nendawo yokuqhuba umbane ngexabiso elipheleleyo kwiGuangzhou BERLIN Parts Manufacturing Co., Ltd.
& Inkonzo yangemva kwemarike yamalungu e-AC
& Iinxalenye zokuqondisa
SinoR kwaye somelele kwaye sinamava
& D kunye neQC iqela likhokelwa ziinjineli zaseJapan ezinamava angaphezulu kweminyaka engama-40
Kwi-compressor, sinikezela ngenkonzo ye-OEM kunye ne-aftermarket. Sinako ukuphuhlisa kunye nokuveliswa compressors ukusuka 110cc-450cc, enokusetyenziselwa imoto abakhweli, imoto zobunjineli kunye ifriji truck. Ukuba awukwazi ukufumana imveliso oyifunayo kwiwebhusayithi yethu, zive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi, siya kukujonga. Ukuba asinayo imveliso oyifunayo, sinokuphuhlisa ngokweemfuno zakho Sinokunikezela ngokuzoba kunye nesampula ukuze uqinisekise.
Iqela leenjineli zaseJapan
namava angaphezu kwama-40 eminyaka
IATF16949 kunye neeSGS
Sibonelela ngemoto ye-OE
Iimveliso zethu ziphumelele kwizatifikethi ezininzi ngokomgangatho kunye nokuyila
I-Guangzhou BERLIN Auto Parts Manufacturing Co., Ltd, eyasungulwa ngo-2006, yinkampani yanamhlanje ekhethekileyo ekuveliseni i-air compressors. Indawo yethu inkampani e Zhuliao Industrial Zone Baiyun District Guangzhou City, ahlanganise indawo yeehektare ezingama-20 kunye nendawo yezityalo ngaphezulu kwe-10,000 square metres. Kuxhotyiswe ngezothutho olufanelekileyo nge-5KM kude neBaiyun International Airport kunye nabasebenzi abangaphezu kwamakhulu amabini kubandakanya ngaphezulu kwama-50 amagcisa. Ukongeza, sine-R ezimeleyo& D Iqela kunye neqela elithengisayo elilindele ukubonelela ngeyona nkonzo intle kuwe.
Inkampani ineqela lolawulo oluphezulu. Isidlulisile isatifikethi se-IATF16949 kwaye sesinye sezimbalwa zabavelisi basekhaya abasebenza ngokuzenzekelayo. Iye yazisa iintlobo ezahlukeneyo zokuvelisa kunye nokuvavanya izixhobo ezibandakanya imigca yaseJapan egcwele indibano zekhompyuter, iziko lokuchwetheza, ibhentshi yovavanyo yaseTaiwan, iJamani i-helium detectors evuzayo, umatshini wokucoca i-ultrasonic, isixhobo sokumitha Uvavanyo lokungcangcazela, umatshini wokuvavanywa kwetyuwa njl.njl. Sinobuchwephesha kunye nolawulo lokulawulwa kwesampulu yophando kunye nokwenza imephu, ukukhula komngundo, ukuqhubekeka okungenanto, iimvavanyo zokusebenza.
Sineentlobo ezintathu zeemveliso eziCofa isiguquli sokufuduswa sangaphakathi, esilawulwa ngaphandle esiguquliweyo sokuhambisa indawo kunye nesiguquli sokufuduka esingaguqukiyo. Sizabalazela ukufumana ukuvunywa kwabaxhasi bethu kunye nokuthembela ngomgangatho wethu ozinzileyo, ixabiso lokukhuphisana kunye nenkonzo ephezulu. Iimveliso zethu zithunyelwa eYurophu, emazantsi nasemantla eMelika, empuma esempuma kunye empuma mpuma Asia njl.
Ukubambelela kwinjongo "zophuhliso kumgangatho, udumo luxhomekeke ekuthembekeni" kunye nomgaqo wolawulo "wokwenza ixabiso kubathengi bethu, abasebenzi kunye namaqabane", siya kuguqula ubuchwepheshe obuphambili bube ziimveliso ezikumgangatho ophezulu ukunceda uluntu kunye inegalelo kuphuhliso loshishino lwezithuthi lwaseTshayina.
Umgangatho onokuthenjwa ukuhlangabezana neemfuno zabathengi bethu
Iimveliso zethu zithunyelwa eYurophu, emazantsi nasemantla eMelika , empuma esempuma nakwimpuma yeAsia njlnjl Sinabathengi kwihlabathi liphela. Isiguquli sethu zonke zintsha kraca, onke amacandelo avela kumthengisi we-OE newaranti yonyaka omnye. Singumthengisi we-OE kwimveliso yeemoto.
Sineminyaka engaphezu kwe-14 yamava 'okuvelisa kunye nokuphuhlisa i-rack steering. Sikwabonelela ngophawu lwendawo eziphezulu zokuthengisa eMntla Melika naseRussia.
Nceda ushiye ulwazi loqhakamshelwano, siya kukubonelela ngenkonzo ye-VIP-to-one kuwe kungekudala.